ကြက်ဥကျူနာငါးဆင်းဒ၀စ်ခ်ျ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကြက်ဥကျူနာငါးဆင်းဒ၀စ်ခ်ျ
Posted by မွသဲ ( 17082011 ) on Jun 26, 2012 in Creative Writing | 21 comments
စားလို့ရပါပြီ။ ၃၀၀၀ ပဲပေးပါ။ ကြက်ဥရော မရောနိစ့်တွေပါလို့ ဒီတခါ အဆီကျကော်ဖီလေးနဲ့တွဲပေးထားပါတယ်။
၁။ ပေါင်မုန့် ၁၈ ချပ်
၂။ ကြက်ဥ ၆ လုံး
၃။ ကျူနာငါး ၁ ဗူး ( ဟင်းရွက်ဆီစိမ်ထားသော )
၅။ သွားကြားထိုးတံ ၁၂ ချောင်း
၁။ ပထမဦးစွာ ကြက်ဥကို ထောပတ်နဲနဲဖြင့် အနှစ်ကျက်အောင်အလုံးမပျက်ကြော်ပါ။
၂။ ကျူနာငါးဗူးဖောက်ပြီးအထဲမှ အရည်များသွန်ပစ်ပါ။
၃။ ပုဂံထဲကို ကျူနာငါးထည့်ပါ။ မရောနိစ်ကို ငါးနှင့်လိုက်ဖက်အောင်ထည့်ပါ။ နှံစပ်အောင်မွှေပါ။
၄။ ပေါင်မုန့်တချပ်ခင်းပါ။ ကြက်ဥကြော်တင်ပါ။ နောက်ပေါင်မုန့်တချပ်ထပ်တင်ပါ။ ငါးမရောနိစ် အရောကို ဖြန့်ခင်းပါ။ အပေါ်မှ ပေါင်မုန့်ထပ်အုပ်ပါ။
၅။ ဒေါင့်ဖြတ်လှီးရန် သွားကြားထိုးတံနှစ်ချောင်းကို အချွန်နားမှာ ထိုးပါ။
၆။ ဒါးဖြင့် တြိဂံပုံ ကန့်လန့်လှီးချပါ။
ဈေးသက်သာပြီး အရသာရှိလှတဲ့ sandwich ကိုအိမ်တွင် မိသားစုများပဲစုစားစား၊ ကျောင်းအလုပ်များသို့ မုန့်အ နေနဲ့ပဲယူယူ၊ ပျော်ပွဲစားထွက်လို့ပဲယူသွားသွား၊ ဧည့်သည်လာလို့ပဲ ဧည့်ခံဧည့်ခံ ချက်ချင်းလုပ်ချက်ချင်း စားလို့ ရပါတယ်။ ဆိုင်မှာသွားစားရင် ၄ ခုပဲပါတာကို ၃၅၀၀ ကျပ်ပေးရပါတယ်။ ( သူကတော့ အာလူးချောင်းကြော် လေး ၁၀ ချောင်းလောက်ပိုပါတယ်ပေါ့။ ) အိမ်မှာလုပ်စားရင် တော့ ၂၅၀၀ ကျပ် မှ ၃၀၀၀ ကျပ် ကြားသာကုန် ကျမှာ ဖြစ်ပြီး မုန့် ၁၂ ခုရပါတယ်။
ဟိုတခါကြက်အူချောင်းပေါင်မုန့်က လုပ်ရမလွယ်ဘူးဆိုသူများအတွက် ဒီတခါ အလွယ်နည်းလေးပေးလိုက် ပါတယ်။ တကိုယ်ရေတကာယသမားများ၊ အဆောင်နေသူများပါမကျန် စားပွဲသေးသေးလေးရှိရုံနဲ့လုပ်လို့ ရပါတယ်။
ဆလပ်ရွက်ကလေးပါပါရင်ပိုကောင်းမလားပဲ… ပြီးတော့ချီလီဆော့လေးပါ တူနာငါးပေါ်ကခပ်ပါးပါးလေး သုတ်ပေးထားလိုက်ရင်ပိုပြည့်စုံမယ် ထင်တယ်….
မရိုးနိစ်က အရသာပါပြီးသားမို့ ချီလီဆော့သုံးလို့မရပါဘူး။ ဟမ်ဘာဂါတွေမှာ မရိုးနိစ်နဲ့ ချီလီဆော့ တွဲသုံးလေ့ရှိပေမဲ့ ( တကယ်တော့ ဟမ်ဘာဂါမှာ Tomato ketchup ပဲ သုံးလေ့ရှိပါတယ် ) sandwich မှာတော့ ဆော့သုံးလေ့မရှိပါဘူး။ ဆော့သုံးရင် sandwich မဟုတ်တော့ ပါဘူး။ ဟော့ဒေါ့ ဒါမှမဟုတ် ဟမ်ဘာဂါဖြစ်သွားမှာပါ။ ဒီဟာကလဲ စိမ့်တဲ့အရသာလိုချင်တာမို့ တခြား strong ဖြစ်တဲ့ အရသာတွေသုံးလို့မရပါဘူး။ ဆလပ်ရွက်ကတော့ ကြိုက်တတ်ရင်ထည့်လို့ ရပါ တယ်။ ကျူနာအောက်မှာခံပါ။ အာလူးချောင်းကအိမ်မှာ အဆင်သင့်မရှိလို့ ထည့်မပေးလိုက် ရတာ ပါ။ အာလူးချောင်းကြော်နဲ့တွဲလို့ရပါတယ်။ အာလူးချောင်းအတွက်တော့ ဆော့ပေး လို့ရပါတယ်။
လုပ်ရတာ လွယ်လည်း လွယ်တယ် ….
အချိန်ကုန်လည်း သက်သာတယ် ….
အိမ်မှာလုပ်တော့ သန့်ရှင်းတယ်…. ။ အတော်ပဲ အစ်မသဲရေ … အဆီလည်းသိပ်မတက်တာကြောင့် … လုပ်စားကြည့်ဦးမယ် …. ။ အခုနောက်ပိုင်း …ဆီတောင် သိပ်မသုံးချင်ဘူးဖြစ်နေတယ် အစ်မရေ … ။ ၀ိတ်လည်းတတ်လာပြီး .. ၊ အရောနှောတွေကလည်းပါတော့ … ရေလုံပြုတ်လောက်ဖြစ်ဖြစ် ၊ ဆီပါဝင်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့ အစာတွေ ရွေးစားနေတာ … ။ ကြက်ဥကိုတော့ .. မွှေကြော်ဒီဇိုင်းလေး ပြောင်းလုပ်လိုက်မယ် စိတ်ကူးတယ် … ဒယ်အိုးထဲ ဆီလေး သုတ်ပြီး … အပူနဲ့ပဲ ကြော်လိုက်မယ် …. ။ အကော်ထည်ဖော်ပြီးလို့ အောင်မြင်လျှင် ….. ပြန်ပြောပါဦးမယ် အစ်မရေ … ။
ဒီနည်းလေးအတွက်တော့ ကျေးဇူးပါ ။
ကြက်ဥကိုထောပတ်နဲ့ကြော်တာပိုကောင်းတယ် တုန်တုန်ရေ ။ အနံ့ကရိုးရိုးဆီနဲ့ကြော်တာထက် ပိုဆွဲဆောင်မှု့ရှိ တယ်။ မုန့်နားကဖြတ်သွားတာနဲ့မွှေးနေတာပဲ။ ဆီကတော့အမလဲသိမ်မသုံးတော့ ဘူး။ အတတ်နိုင်ဆုံးဆီမသုံးရတဲ့ ဟင်းတွေပဲချက်နေတော့တယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက်သိသာ လာတယ်သိလား။ အဓိက ဗိုက်ခေါက်ထွက်မလာတော့ဘူး ဟီးးးးးးးးးးးးးးးးးးး [:-bd] ရူးတိုးတိုးသူများတွေကြားသွားအုံးမယ်။ [:*]
ကြက်ဥကိုထောပတ်နဲ့ကြော်တာပိုကောင်းတယ် တုန်တုန်ရေ ။ အနံ့ကရိုးရိုးဆီနဲ့ကြော်တာထက် ပိုဆွဲဆောင်မှု့ရှိ တယ်။ မုန့်နားကဖြတ်သွားတာနဲ့မွှေးနေတာပဲ။ ဆီကတော့အမလဲသိပ်မသုံးတော့ ဘူး။ အတတ်နိုင်ဆုံးဆီမသုံးရတဲ့ ဟင်းတွေပဲချက်နေတော့တယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက်သိသာ လာတယ်သိလား။ အဓိက ဗိုက်ခေါက်ထွက်မလာတော့ဘူး ဟီးးးးးးးးးးးးးးးးးးး [:-bd] ရူးတိုးတိုးသူများတွေကြားသွားအုံးမယ်။ [:*]
အစ်မသဲရေ … လှို့ဝှက်ချက်က ဂလိုကိုး … ။ စမ်းကြည့်ပါဦးမယ် … ။
ဒါနဲ့ တချို့ ထောပတ်ဗူးတွေမှာ ကော်လက်စ်ထရော ဖရီးဆိုပေမယ့် ..အ ထိုက်လျှောက်တော့ …. ပါမယ် ထင်ပါတယ် … ။ ဒီရက်ပိုင်း သိသိသာသာဝိတ်တက်လာလို့ မနည်း ပြန်ချနေရတယ် … ဒီလောက်လည်း မစားပဲနဲ့ ……. ပင်ပန်းလေ .. ၀လေ ဖြစ်တော့မယ်ထင်ပါရဲ့ ….. ။
သဲလေးရယ် ကိုဖရဲစားသွားပါတယ် ( ကိုပေ လေသံဖြင့်)
အန်တီသဲနုရေ အိုဗာတင်းနဲ့မှ စားချင်တယ်
အဲဒါနဲ့ တင် မဝသေးဘူး
နောက်ထပ် အများကြီး ထပ်လုပ်ကျွေးအုန်းနော
မသဲနုအေးရေ ကူးယူမှတ်သားသွားပါတယ်နော်။ နောင်လည်း ဒီလိုလွယ်လွယ်လုပ်လို့ရတဲ့ မုန့်လုပ်နည်း
လေးတွေ များများတင်ပေးစေချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ။
အပြင်မှာလုပ်စားလေ။ အဲဒါဆိုကိုယ်တိုင်စားရမှာ။ နောက်ထှာနော်။ အရဂါး အတည်ပါ။
TNA သွားရေကျအောင် တင်ထားတဲ့အတွက်
နေ့လည်ထမင်းစားပြီး ၃နာရီကြာတော့ ထပ်ကြည့်သည်…
ကျွန်တော်ဘ၀က အသက်(၇၀)ကျော်အဖိုးကြီး ၁၆နှစ်သမီးကို ချစ်မိသလိုဖြစ်နေပြီဗျာ…
ကြင်နာချင်ပေမယ့်… အားမတန်လို့ မာန်လျော့ရသလိုမျိုးပေါ့…
စားချင်ပေမယ့်… ကျွေးမယ့်လူမရှိတော့ ပုံကြည့်နေရသလိုပါပဲဗျာ…
ဖက်ဖက်ကက်ရေ။ လိုအပ်သော ပစ္စည်းများကိုဝယ်သွား။ အိမ်ရောက်ရင် အင်းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး[:))]
မဒမ်ဖက်ကက်ကို——————————– လုပ်ပြီးကျွေးလိုက်ပေ့ါ။[:D] အဲဒါဆိုကိုယ်လဲစားရ သူလဲစားရ။ မကောင်းဘူးလား။ ( လုပ်ခိုင်းမှာမဟုတ်တဲ့အတူတူ လုပ်ကျွေးခိုင်း လိုက်တော့ ပြီးတာပဲနော့ )
တူနာငါးလေးနဲ့ Sandwich ကိုကြိုက်တယ်…
မွှေကြော်နဲ့စားလို့တော့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကြက်ဥကိုပုံမပျက် အနှစ်ကျက်အောင်ကြော်ပြီး လှီးတဲ့ အခါမှာ အဲဒီကြက်ဥအနှစ်ကိုပါထက်ဝက်ဖြစ်အောင်လှီးလိုက်မယ်ဆိုရင် အဲဒီ Sandwich က ဘေး ကပတ်ကြည့်ရင် ဖြူဖြူလေးတွေကြားထဲမှာ ၀ါဝါထူထူလေးဖြစ်နေတာကဆွဲဆောင်မှု့တမျိုးမို့ လှပမှု့ အရ မွှေကြော်တာထက်သာပါတယ်။ ကြက်ဥပြားပြားထက် အဲလိုတ၀က်တပျက်ထူနေတာ ကပိုပြီးဆွဲဆောင်မှု့ကောင်းတယ်လို့ ကျွန်မထင်တယ်လေ။ နှစ်မျိုးလုံးစမ်းကြည့်ပေါ့။ ကျွန်မက အလှကလဲကြိုက်သေးတာကိုး။
တောက် ကိုအောင်ဘုကြီး မနက် နေ့ ညစာနဲ့ ပဲပုပ်လေးနဲ့ စားလိုက်ရရင်တော့ ရှလွတ်
တူနာ ဆင်းဒ၀ှစ်ကိုကြိုက်တယ် … စားချင်စရာကြီး …. ကိုယ်တိုင်လုပ်စားမယ်…. လုပ်နည်းအတွက်ကျေးဇူးပါ သဲရေ…